🥇 ▷ Kuwa yar! Caviar wuxuu abuuraa shan nooc oo iPhone 11 ah oo leh gogo 'dayaxa ✅
Kuwa yar! Caviar wuxuu abuuraa shan nooc oo iPhone 11 ah oo leh gogo ‘dayaxa
Isticmaalayaasha iPhone-ka jecel iyo kuwa xiisaha badan waxay sugayaan Sebtember 10, marka Apple waxay ku dhawaaqi doonaan khadkooda cusub ee taleefannada. Muhiimaddu waa qaabeynta kamaradda cusub, oo si khaldan loo qoondeeyay si markaa dareemayaasha seddexda ahi ay ugu habboon yihiin unug laba jibaaran.
In kasta oo iPhone 11 uusan garaacin shelfyada, Caviar, oo ah shirkad Ruush ah oo caan ku ah soo saarista taleefanno casri ah oo gaar ah iyo moodello daabacan oo xadidan oo ku saleysan moodooyinka hadda jira, ayaa sii deysay fikradaha laga sameeyay calanka cusub ee tufaaxa.
Aruurinta Space waxay ka kooban tahay shan nooc oo raaxo leh oo iPhones ah oo lagu qurxiyo – sida magaceedu ku tuso – alaabada bannaan, sida jajabyada markab boqortooyo iyo jajabyo hal ah. Sababtoo ah waxay ku saleysan yihiin moodooyinka Apple, faahfaahinta waa la jaan qaadi karaa, sida kamarad saddex-geesood ah.
Qaabka calaamadaha ururinta ayaa ah Nuqulka Dayax-gacmeedka Caalamka, oo loo daawaday qeybta ‘Go Go Digital’ portal. Sida lagu xusay warbixinta websaydhka Dutch-ka, waxaa jira dheeman dheellitir ah oo matalaya meerayaasha kala duwan, halka meelaha kale ee dahabka ah ay matalaan orbits-ka. Saamaynta ficilku waa miisaanka kordhaya ee moodelka.
Qalabka loo isticmaalay in lagu dhiso moodooyinka waxaa ka mid ah dheeman, dhejis, topaz dhif ah iyo xitaa qeybo ka mid ah meteorites, iyo sidoo kale qeybaha sare ee aan soo sheegnay ee meelaha banaan iyo jajabyada dayaxa.
Ururintaan waa shey qaas ah oo ka mid ah shaqada gacanta ee aadka u adag ee la istcimaalo iyada oo la adeegsanayo qalab dhif ah oo bini aadamku runtii ugu baahnaayeen inay galaan meel bannaan. Waxaan isku darnaa tan iyo tikniyoolajiyad hal abuur leh iyo fikrado qurux aan waqti laheyn
Caviar, iyada oo loo marayo afhayeen.
Saacad farsamo ayaa lagu dhejiyay taleefanka casriga ah ee ‘Caviar’, kaas oo hubiya saxsanaanta ugu badan. Moodeel la mid ah, iPhone Tourbillon Limited Edition, oo ku saleysan iPhone XS iyo iPhone XS Max ayaa la bilaabay bishii Maarso ee sanadkaan sidoo kale waxay lahaayeen saacad farsamo yaqaan ah.
Caviar iPhone 11 taxanaha Nooca Gaarka ah ayaa la bilaabi doonaa bisha Sebtember ee sannadkan, wax yar ka dib markii lagu dhawaaqay moodooyinka cusub ee Apple. Laakiin waxaa xusid mudan in sida muuqata moodalkani aanu qof kasta u ahayn. Waxaa jiri doona oo keliya 99 nuqul, oo lagu sugi karo unugga, amar horudhac ayaa loo baahan yahay. Qiimuhuna wuxuu u dhigmaa sifaha gaarka ah. Dhexaadka ‘Universale Diamond’ wuxuu leeyahay qiimo bilow ah $ 48,780, ama $ 197,000 oo toos ah, oo aan canshuur laga beddelin.
Marka laga soo tago astaanta, waxaa jira Edition Singulary Edition, oo loogu talagalay godka madow, bakhtiga madoow iyo jajabyada meteorite, iyo qiimaha tafaariiqda oo lagu taliyay $ 5740. Soosaarka Soyuz wuxuu u heellan yahay tartankii booska Soviet, oo ay ku jiraan jajabyo dhab ah oo diyaaradeed iyo a Qiimaha tafaariiqda ee la soo jeediyay oo ah $ 5290. Waxa kale oo jira khadka ugu raqiisan santuuqa Explorer, iyada oo qiimaha tafaariiqda la soo jeediyay uu yahay $ 4530 US.